UGoogle ubhengeza ukumiliselwa ngoMeyi 7: iPixel 3a ngolindelo | I-Androidsis
Inyanga elandelayo inokuba yinto enomdla kubathandi beefowuni. Kukho amarhe okuba I-OnePlus iya kuphehlelela iflegi yayo elandelayo, i-OnePlus 7, ngoMeyi 14; UAsus al Zenfone 6, ngoMeyi 16; kunye ne-sub-brand kaHuawei ukuya Hlonipha i20, NgoMeyi 21. Kodwa ngaphambi kwayo yonke le nto, UGoogle uza kutyhila ukumangala kwakhe.
Ivenkile kaGoogle ekwi-Intanethi ngoku inetray ethi into entsha iza kuza ngoMeyi 7. Ukulandela ukutyhilwa kwayo, kwavela intelekelelo yokuba lo msitho wokumiliselwa kokuzayo IPixel 3a kunye nePixel 3a XL.
Ukongeza kwipowusta ebhengeza umsitho, UGoogle uphinde walayisha ividiyo yedabi le Abaphindezeli: Imfazwe engapheliyo ukusuka eNew York. Ividiyo ehleliweyo ibonisa iqela labantu abane Iifowuni zePixel 3. Kukho eminye imifanekiso evela kwiitreyila ze Abadlali: Ixesha lokugqibela. Ividiyo iphela ngoGoogle etyhila ukuba i-playmojis ye Abaphindezeli ngoku ziyafumaneka ebaleni lokudlala, lilungiselelwe iPixel 3 kuphela.
Kukho ilivo elithi: "Nge-7 kaMeyi: Into eNkulu iza kwiPixel Universe". Ungabhalisa kwi-portal yewebhu ukufumana iinkcukacha malunga nokuqaliswa kwemveliso ngaloo mini, njengesaziso.
Asazi ukuba kutheni uGoogle edibanisa imovie Abaphindezeli ngokukhutshwa kweefowuni zombini, ngaphandle kokuba ufuna ukusixelela ukuba u 'a' kumagama efowuni (iPixel 3a kunye nePixel 3a XL) imfutshane abaphindezeli. Le yinto engacacanga.
Ngomhla we-7 kaMeyi ngumhla kaGoogle I / O oqala ngawo Kwaye inkampani yeNtaba yokujonga kulindeleke ukuba ibonise iPixel 3a kunye nePixel 3a XL kulo msitho. Zombini zii-smartphones eziphakathi kwebanga kwaye ziya kuba zitshiphu, iinguqulelo ezisikiweyo zePixel 3 kunye nePixel 3 XL.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » UGoogle ubhengeza into entsha eza ngoMeyi 7: isenokuba yiPixel 3a duo